နောက်ဆုံးအဆင့်တွင်အီစတာဥပေါ်လာမှကြွလာနှင့်ရက်စွဲအားအလွန်ရှုပ်ထွေးဖြစ်ပါသည် - BGR - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » Entertainment နောက်ဆုံးအဆင့်တွင် "အီစတာဥပေါ်လာမှကြွလာနှင့်ရက်စွဲအားအလွန်ရှုပ်ထွေးဖြစ်ပါသည် - BGR
ကြည့်ရှုခြင်း Avengers: နောက်ဆုံးအခြေအနေဟာ ရုပ်ရှင်ရုံထဲမှာအဓိကအားနည်းချက်ရှိပါတယ်: နေပါစေသင်ကြည့်ရှုပုံကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာ, သင်ဆဲကထောက်ပံ့အချက်အလက်တွေအားလုံးကိုဖမ်းယူနိုင်ဘူး, သင်အတော်ကြာအီစတာကြက်ဥလက်လွတ်နိုင်ဘူး။ ထို့ကြောင့်။ Howard အဆိုပါ Duck Thanos စစ်တိုက်ခြင်းငှါအဆုံးမှာတစ်ဦးတံခါးဝကတဆင့်ဝင်ဆိုတဲ့အချက်ကိုလိုပဲ။ သငျသညျယခုဒစ်ဂျစ်တယ်ဗားရှင်းမရရှိနိုင်ကြောင်း, အိမ်မှာရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ဖို့ရှိသည်, ဒါကြောင့်သင်ပိုမိုအသေးစိတ်အတွက် image ကိုစစ်ဆေးခြင်းဖို့လိုအပ်အခါတိုင်းသင်ဖတ်ရှုခြင်းရပ်တန့်နိုင်ပါ။ ဤသည်ကိုအလွယ်တကူကျနော်တို့အစဉ်အဆက်မတိုင်မီဖူးထက်ပိုမိုရှုပ်ထွေးအီစတာကြက်ဥကဘာလဲဆိုတာရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာရုံ Redditor ရှိပါတယ်အရာဖြစ်တယ်။
ကျနော်တို့မကြာခဏ၏ကြံစည်မှုများ၏အနည်းဆုံးဒြပ်စင်များ၏တဦးတည်းဆွေးနွေး နောက်ဆုံးအခြေအနေဟာ နှင့်တည်ရှိမှုနှင့် Pym မှုန်စီမံခန့်ခွဲမှု ။ သေစားသေစေသောလွယ်ကူစွာသူတို့ခရီးမှအမှုန်တစ်လျောက်ပတ်သောအသံအတိုးအကျယ်ရှိသည်ဖို့ခွင့်ပြုခဲ့ကြလိမ့်မယ်လို့တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားအစီအစဉ်ဖွံ့ဖြိုးနိုင်တယ်။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, အကယ်. အတိတ်၌ရှိသောအရေးယူဆောင်ရွက်မှုအသစ်တခုပြက္ခဒိန်ဖန်တီးဒါကြောင့်အဘယ်ကြောင့်လူငယ်တစ်ဦး Hanks Pym ကောက်ဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုသူ့ကိုပြောပြနှင့်အမျှလိုအပ်သောအဖြစ်အများအပြားအမှုန်တွေနဲ့အထောက်အကူပြုဖို့သူတို့ကိုမမေး?
Pym မှုန် 2014 Thanos ၏ဆိုက်ရောက်အတွက်လည်းအလွန်အရေးပါဖြစ်ကြသည်။ Nebula ထိုအချိန်ကသင်္ဘောယူပါလိမ့်မယ်မတိုင်မီသူမှုန်ဒီဇိုင်းကိုပြောင်းပြန်ကြရပေမည်။ ဒါကကျနော်တို့သောအခါအထင်ဘာလဲ နောက်ဆုံးအခြေအနေဟာ ဧပြီလနှောင်းပိုင်းနှင့်တစ်ခုခုအတွက်ဖြန့်ချိခဲ့သည် အံ့ဩခြင်းပြီးသားအတည်ပြုလိုက်ပါတယ် .
ကျနော်တို့ကအောက်ပါမျက်နှာပြင်ပုံကြည့်ရှုရှေ့မှာဤအငြင်းပွားစရာများ Pym မှုန်မှပြန်လာခဲ့ရသည်:  Image ကိုရင်းမြစ်: Reddit မှတဆင့်အံ့ဩခြင်း
ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေ Reddit image ကိုမကောင်းသောအ Nebula ကမ္ဘာမြေပေါ်တွင်မိမိအဘ၏စစ်တပ်ဆင့်ခေါ်သည့်အခါ screen ပေါ်မှာရဲ့ခရီးသွားစာအုပ်ကိုပြသထားတယ်။ ထိုအနှစ်အာရုံစိုက်နှင့်သင်ထူးကဲတစ်ခုခုသတိပြုမိပါလိမ့်မယ်။ တစ်စုံတစ်ဦးကနောက်ကျော2988 ဘီစီသွားဖို့စက်ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ အေဒီ, သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးသူတို့လိုခြင်းနှင့်ကသတင်းစာထဲမှာဖွင့်အဘယ်ကြောင့်ပါပဲ။
အဘယ်ကြောင့်အဘယ်သူကိုမျှဒီခရီးစဉ်ကြိုးစားကြမလဲ အဘယ်ကြောင့်သူတို့ကအဖြစ်ဝေးသူတို့အချိန်ခရီးသွားဘို့လိုအပ်တယ်အဓိကအရင်းအမြစ်အလွယ်တကူမရရှိနိုင်ကတည်းကပြန်သွားပြီးမလဲ နောက်ထပ် Redditor Svartalfheim ၏ပထမဦးဆုံးစစ်တိုက်အဲဒီနှစ်ရာအရပျကိုယူကြောင်းရှင်းပြသည်။ စစ်တိုက်ခြင်းငှါ Asgard အနက်ရောင်နှင့် Elves Malekith ရှုံးရှိရာဤသည်ကား, Aether ရှိ၏။
ဒါဟာကိုယ့်ကိုယ်ပိတ်သောကျောက်၏အဖြစ်မှန်ရဖို့နည်းလမ်းတစ်ခုရဲ့, ဒါပေမယ့်ဒါဟာသေချာပေါက်ကိုအကောင်းဆုံးမဟုတ်ပါဘူး။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒုံးပျံနှင့် Thor Aether ဂျိန်း Foster extract မှ 2013 အတွက် Asgard သို့ပြန်သွား၏။
သို့သော်အဘယ်ကြောင့်ဒီအသတင်းစာရှိသလော သူကားအဘယ်သူကြောင့်ယခုအချိန်အထိပြန်ရောက်သွားကြဖို့စက်ကိုအသုံးပြုခြင်းများအတွက်တာဝန်ရှိပါသလဲ Thor Bor, သူ့အဖိုးကိုမြင် 2988 ဘီစီတစ်ဦးလွှဲယူသလဲ? သူတို့အချိန် Heist စီစဉ်ခဲ့ကြသည်စဉ်ဤ Thor ၏မူးယစ်စေခြင်း၏ပြည်နယ်ပေးထားမဖြစ်နိုင်ပုံရသည်။ ဒီတော့အဘယ်ကြောင့်ယခုနှစ်သတင်းစာရှိပါသနည်း အံ့ဩခြင်းဟာ MCU ၏5အဆင့်ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုရှင်းပြနိုင်ပေမယ့်ထိုအတောအတွင်းတွင်သင်တို့ကိုအောက်တွင်အပြည့်အဝ Reddit ချည်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။